Radanoara Julien : “Krizin’ny fahefam-panjakana ny fitsaram-bahoaka” | NewsMada
Radanoara Julien : “Krizin’ny fahefam-panjakana ny fitsaram-bahoaka”
Inona marina no mampirongatra ny fitsaram-bahoaka amin’izao? Maneho ny fijeriny ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien: “Eo ny krizin’ny fahefam-panjakana, ny tsy fahatokisan’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ary ny fitondram-panjakana ankapobeny.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao?
Radanoara Julien (-): Mihamantra ny firenena. Marina fa misy ataon’ny fitondrana, nefa tsy hita hoe mivaingana haingana. Ny tokony hataon’ny fanjakana: inona ny mbola tsy hitany, nefa fantatry ny olon-kafa amin’izay tokony hatao? Izay no ilàna fifampidinihana.
Raha tenenina, ohatra, ny tsy fandriampahalemana: efa mihasarotra be. Manafika ny dahalo sy ny jiolahy ny mpitandro filaminana. Nefa mivadika izany amin’izao fotoana izao: ireny indray no vonoin’ny olona… Hatramin’ny dahalo sy ny mpitandro filaminana izany, tratran’ny hoe fitsaram-bahoaka izao.
* Inona no tokony hataon’ny fanjakana amin’izany?
– Haverina ny fifampitokisana eo amin’ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana aloha. Eo koa ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana, eo amin’ny vahoaka sy ny fanjakana, ary eo amin’ny vahoaka sy ny fitsarana. Fifampitokisana mifamaly izany amin’ireo…
Ho an’ny miaramila, mila haverina indray ny fanaovana dia an-tongotra amin’ny fitetezam-paritra toy ny tamin’ny andron’ny fanjanahantany. Anjaran’ny miaramila ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ny dikan’izay: tokony handeha an-tongotra any Antsiranana ka hatrany Toliara ny miaramila.
Satria hoe hiaro ny tanindrazana sy ny vahoaka ny miaramila, tokony ho fantany ny tanindrazana sy ny vahoaka arovany. Na eto Antananarivo fotsiny aza, ohatra: firy amin’ny polisy no mahalala an’Antananarivo raha hanenjika mpanendaka sy mpangoram-paosy? Samy mihazohazo fotsiny eny…
Raha mandeha an-tongotra, ohatra, ny miaramila, miresaka amin’ny vahoaka isaky ny tanàna na fokontany: miaro ny vahoaka amin’izany sady mamerina ny fahatokisany. Mba hitan’ny vahoaka izay miaramila miaro azy, miara-miasa aminy.
Amin’izany, fantatry ny miaramila i Madagasikara… iray vohitra. Amin’ny fanenjehana dahalo, ohatra, misy ny kizo maromaro, nefa tsy sahin’ny miaramila idirana satria toerana tsy fantany: manjary midi-kizo… Nefa tokony hatao izay mba hahafantarana ny toeran’ny dahalo. Rehefa tena fantatra izay toerana misy ny dahalo, hapoaka amin’ny dinamita…
* Inona izany ny vahaolana amin’izay fitsaram-bahoaka izay?
– Tokony hametraka fitsarana manakaiky ny vahoaka ny mpitondra fanjakana sy ny mpitsara. Misy manana grady voalohany ao amin’ny fitsarana tampony, asaina mandrafitra dina miaraka amin’ny mpiray dina. Ara-dalàna ny an’ny olona any ambanivohitra, tsy misy fanjakana na miaramila na polisy na zandary: na tiana na tsia, tsy maintsy manao dina izy mba hiarovany ny tanànany.
Nefa matetika ny dina, mihoa-pampana ary mifanohitra amin’ny lalàna famaizana sy ny lalàna velona ary ny zon’olombelona: raha azo ny mpangalatra, tapahin-doha. Mba hisian’ny hoe dina mifanaraka amin’ny lalàna velona, haparitaka ny mpitsara hiara-kandrafitra amin’ny vahoaka ny atao hoe dina. Amin’izay, manoro izay tsy mety amin’ny dina izy ireo: fanapahan-tanana mpangalatra, ohatra.
* Inona no mampirongatra be ny fitsaram-bahoaka tato ho ato?
– Eo ny krizin’ny fahefam-panjakana, ny tsy fahatokisan’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ary fitondram-panjakana ankapobeny. Mahatsiaro toy ny kamboty ny olona, fa tsy mahavita araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana: votsotra ny olon-dratsy any amin’ny polisy sy ny fitsarana. Aleon’ny olona vitainy ny raharaha, fa efa leo izy…
Mikiry mafy amin’ny fitadiavana izy, nefa lasan’ny olona fotsiny amin’izao ny vokatra. Na fambolena izany, na fiompiana… Nefa tsy hita izay vokatra ataon’ny mpitandro filaminana. Misy antsoina, elabe vao tonga. Mandiso fanantenana raha efa mahantra ny tena, mbola alaina indray ny kely ananana sy izay vokatra.
Tokony hisy fanazavana ny didy aman-dalàna rehetra amin’ny haino aman-jery. Fanabeazana ho olom-pirenena izany: fampandraisana andraikitra ny fanjakana, ny olom-pirenena… Mila hazavaina tsara amin’ny olona ny fomba fizotran’ny fitsarana. Misy foto-kevitra iray izay tsy mazava tsara amin’ny vahoaka, ohatra: ny hoe fanafahana noho ny fisalasalana. Ny dikan’izay, tsy hoe afaka madiodio, fa eo ny fisalasalana: raha tsy ampy ny porofo eo an-tanan’ny mpitsara, tsy afa-kanameloka izy. Aleo manafaka olo-meloka toy izay managadra tsy manan-tsiny.
* Ahoana ny amin’ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao?
– Betsaka no tokony hataon’ny fanjakana… Izay no ilàna ny fifampindinihana. Inona ny hanamaivanana haingana dia haingana ny filana andavanandro: rano madio fisotro, herinaratra, sakafo…? Mila mitady an’izay ny fitondram-panjakana. Amin’izany, atao koa ny asa antonona sy lavitra ezaka.
* Ny amin’ny tsy faneken’ny fiombonambe iraisam-pirenena ny fanilihana kandidà amin’ny alalan’ny “Tsy… tsy… “? Nefa ry zareo ihany no nametraka izany tamin’ny fifidianana 2013.
– Efa misy olona tian-dry zareo hapetraka ao… Misy olona andehanan’ny ambasadaoro isan-karazany ireny, ohatra. Nefa misy mpitondra fanjakana ara-dalàna hoe voafidim-bahoaka eo. Tazontazony ny fitondrana amin’izao, fa tsy afa-kiteny fanonganam-panjakana ry zareo. Nefa efa mitady vahaolana solony izy amin’izany: asain’ny miady amin’ny kolikoly, manalasala; jereny ny fitondrana tsara tantana, manalasala…
Raha ny tokony ho izy, tsy mahazo vola raha tsy manaja an’izay. Izay ny ao anatin’ny Fifanarahana Cotonou, ny Fifanarahana eo amin’ny Vondrona eoropeanina sy i Afrika sy i Karaiba ary i Pasifika (ACP). Ao i Madagasikara. Nefa omeny vola tsikelikely ihany ny tena. Raha tsy manome izy, vao mainka krizy ny eto ary hiafara amin’ny fanonganam-panjakana. Tsy te hiditra amin’izay izy, fa ho sahirana rehefa avy raha misy fanonganam-panjakana eto. Ny ataony, efa mitady olona izy.
Nangonin’i R. Nd. / Sary : Mamiherison